Baningi impela imibuzo Wabasaqalayo lo umsebenzi kufana nokuphakamisa dumbbells phambi kwakho. Iqiniso ukuthi ke Lingachazwa ngezindlela ezahlukene by Wabasaqalayo, futhi ngokufanelekile, kwenziwe amaqembu ahlukene ngokuphelele kwemisipha. Ngakho-ke, kulesi sihloko umfundi uzothola ulwazi okuncane mayelana nokuvusa dumbbells, futhi simazi ne inqubo lokuqaliswa yayo kanye nezincomo ochwepheshe.
I Mechanics of the umsebenzi
dumbbells Yelula phambi kwakho kungenziwa ngezindlela ezahlukene, okubandakanya imisipha ezahlukene. Ngaphambi uzihlole umsebenzi, kungcono ukuqala izihambisimshini futhi uthole ukuthi yini wonke umzimba kukhona. Akukho inkinga:
oqeda indololwane waseselulama ingalo obandakanya ingxenye phambi imisipha deltoid (emahlombe);
lapho wacosha ngesandla eguqa bafike endololwaneni (ngezandla zakhe) izandla imisipha biceps ziyasebenza;
uma izandla akusebenzise izintende kude nani futhi uphakamise Sisindvo eqondisa endololwaneni, umsebenzi uphendulela triceps izandla.
Yiqiniso, akusiwona wonke umzimba ukuthi zingahlanganiswa ephakamisa dumbbells phambi kwakho. Ngokwesibonelo, uma ukushintsha engela ukuthambekela umzimba, zingenziwa ukusebenza imisipha emuva, esifubeni noma esiswini, kodwa yilokho esigxila kukho lapho lesi sihloko kuphela umsebenzi ovela imile.
Ukuphakamisa dumbbells ngoba biceps ithandwa kakhulu phakathi kokubili imfundamakhwela futhi phakathi abadlali professional. Ayikho into eyinqaba, ngoba imisipha izingalo zihlale emehlweni, ngokufanele, yimuphi athlete self-ukuhlonipha kwakuyodingeka babe nomthelela "amabhange."
Yilokho nje akubona bonke abasubathi amachwane esekwazi kahle ukwenza umsebenzi. Sizoba ukubasiza kule. Ngokushesha kuyafaneleka ukuthi kukhona isikhundla ebalulekile isandla ngokuhlobene esifubeni ka lo msubathi. Kunamandla isandla kwenzakala wena, wahileleka kakhudlwana umsebenzi imisipha biceps. Nokho, ingozi yokulimala kuleli cala zanda kakhulu. Zonke amakilasi ezinesisindo kungcono ukuqala ngaphansi kokuqondisa ochwepheshe. Lokhu kuzovimbela izimfundamakhwela ziyaye kusukela izinkinga esengxenyeni kuqala.
Phakathi umsebenzi entendeni isebangeni kangcono kangangokuthi kule nqubo ye ukuthuthela kwesilevu welulela umsubathi - iyona elula kunazo ephakamisa engela. Ungakhohlwa ukuthi izindololwane zakho ngesikhathi umsebenzi kufanele kube eseduze esifubeni.
Bambalwa Wabasaqalayo ukwazi ukuthi yimuphi umsebenzi nge eziya ziba zimbi e imile sinzima kakhulu kabuhlungu emgogodleni. Ngakho-ke, ukuze ngandlela-thile akhulule umthwalo ke, kudingeka ufunde indlela shift maphakathi gravity. Kahle kahle, wonke amakilasi ezinesisindo is arcade kwenziwa nge ibhande yabasubathi, okuyinto umane ngeke avumele akwazi ukugcina vertebral ukuze deform noma ukuhambisa lapho uvivinya umzimba.
Kuyokusiza saqala ukuxazulula inkinga nge load sekulinganisa futhi indlela ekusebenziseni. Iqiniso ukuthi izandla phezulu kungaba kwenziwe kanyekanye hhayi kuphela, kodwa yanjalo. Yebo, ngempela kusiza ukukhishwa kwanoma yimuphi umsebenzi. Ngaphezu kwalokho, ukunyakaza ngokwabo kanzulu xaxa, futhi ngenxa yalokho, lesifanele ngaphezulu.
Le nqubo ye emamasela lamancane esandla
Ukuphakamisa dumbbells phambi umthwalo imisipha biceps is arcade kwenziwa ekupheleni ukuqeqeshwa noma ngemuva Amazing okukhulu. Iqiniso lokuthi Imicu yotshani imisipha encane ezingalweni zakhe ngaphansi kwethonya umthwalo zidabukile kalula, okubangela athlete yokulimala.
Akubalulekile ukuba asondele ngowokuqala ukuqala ephakamisa dumbbells esindayo, kungcono ukwenza omunye indlela nge isisindo sokuzalwa, njengoba gaphambi. Ubufakazi obanelisayo ukuthatha silinganiso amakhilogremu ambalwa (isib dumbbells 2 kg) ukufudumeza kwemisipha kahle esebenzayo. Khona-ke yonke into ilula - umsebenzi wenziwa 3-4 amasethi 8-12 rep. Phumula emkhatsini izivivinyo kufanele zigcinwe zimbalwa. Kahle kahle, ikhefu kumele singeqi imizuzwana 40-60.
emahlombe Okubanzi - isihluthulelo sempumelelo
Futhi uma acabangele ukuthuthukiswa kwe- imisipha deltoid, le dumbbells ephakamisa phambi wenza kancane indlela ehlukile. Lapha umsebenzi oyinhloko imfundamakhwela umsubathi lisebenza imiklamo. Ukuphakamisa izandla zakhe phezulu kufanele kwenziwe ngokuvumelana indlela ngokuqinile kuchazwe motion - yimuphi ukuphambuka ngokushesha usekhuluma umthwalo nezinye izicubu. By endleleni, lokhu kuyinto umsebenzi ngenxa delta is the abathandanga kakhulu phakathi zifiki, ngoba akekho kubo iyakwazi ukwenza kahle.
Njengoba bemisipha dumbbells biceps phezulu ukwelula ukuba ngigxilise ingqondo. Nokho, zikhona ochwepheshe batusa ukwenza ngamakheshi kungukuthi zilandelana, kodwa ngesikhathi esifanayo. Iqiniso liwukuthi abantu abaningi Ukuboshelwa athuthukile emahlombe, ngakho ngo-inqubo uzotshala imisipha deltoid isandla namandla uyokusekela kwezintambo zesivikelo sesifuba ababuthakathaka.
Kungakhathaliseki usaqala ukusebenza ezinye isisindo, ake kube dumbbell 2 kg noma 32-ganda isisindo. Kunoma ikuphi, indima esemqoka udlalwa kwezemidlalo akulona isisindo, futhi inqubo ekusebenziseni. Empeleni, noma yimuphi athlete, ukwazi ukusebenza indlela, kusheshe ukwakha yemisipha nge kancane esiya siba sibi. Kodwa lo msubathi ongasinaki inqubo uzobe ezigugile isikhathi eside nge dumbbells esindayo ehholo, kodwa ngeke sifinyelele umphumela. Ingabe ukuthi ukulimala angazuza.
Futhi ngokuvamile Wabasaqalayo unesithakazelo komunye umbuzo: "Indlela uphefumule ngendlela efanele ngenkathi nokuphakamisa izinsimbi?" Phela, zhimami induku squats, futhi ngakho-ke kucacile - njengoba exhale ayiphathise konke emandleni ezinyakazayo, kodwa mahah umthwalo inyuka ngesikhathi ebuya izandla zakhe ukuba indawo yokuqala. Nokho, asikho isidingo ukugxila wehlise isandla - imisipha wahlaba kuphela uma kwezandla kuso futhi kufanele bagxila. Ngakho, umoya kumele kwenziwe ngesikhathi dumbbells ephakamisa.
Ngakho, iziphi iziphetho kungenziwa shi? Okokuqala, nivuse dumbbells phambi kwakho - akusiyo one, kodwa lonke eziyinkimbinkimbi, okuyinto ikuvumela ukuthuthukisa imisipha ezahlukene izingalo. Khona-ke imfundamakhwela kungcono lokunquma umsebenzi by umthwalo nento ayegxila kuyo (emahlombe, biceps, triceps). Isici sesibili ukunciphisa amathuba yokulimala - zonke izivivinyo kufanele kanzulu wazibulala ngqo emgogodleni. Kodwa Isici sesithathu siwukuthi inqubo umsebenzi. Umsubathi akumelwe ukwazi kuphela indlela elungile nokuphakamisa izingalo, kodwa futhi bakwazi ukuphefumula kahle lapho uvivinya umzimba.
Izibonakaliso umqondo of icala lomthetho. Izinhlobo of icala lomthetho
Inhlangano yokusungula kwempahla. izigaba
Ubuhlungu imithi "Tramal". Yokusetshenziswa